ကှနျပြူတာဆိုငျရာ သငျခနျးစာမြား နှငျ့ IT ဗဟုသုတမြားကို အမွဲလလေ့ာနိုငျဖို့ . . . . .
ဒီနအေ့တှကျတော့ နညျးပညာကိုစိတျဝငျစားတဲ့ မောငျငယျ၊ ညီမငယျလေးမြားကို Web Development ဆိုငျရာ စာအုပျမြားကို အခမဲ့ Download ရယူနိုငျတဲ့ Website Link လေးနဲ့အတူ Website ရေးဆှဲနညျးတှကေို အခွခေံကအစ အသေးစိတျ Videos မြားကို ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံလေး ဖျောပွ၊ သငျကွားပွသပေးနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ CKC YouTube Channel လေးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
ဒီ CKC YouTube Channel မှာ ဘာတှလေလေ့ာလို့ရသလဲဆိုရငျ Website ရေးနညျးအခွခေံ၊ Microsoft Word သငျခနျးစာမြား၊ ကှနျပြူတာ နှငျ့ Mobile Phone ဆိုငျရာ သငျခနျးစာမြား၊ Facebook Marking ဆိုငျရာ သငျခနျးစာမြား အစရှိသဖွငျ့ လလေ့ာစရာတှေ အမြားအပွား ပါဝငျနတောကို လလေ့ာတှရှေိ့ရမှာပါ။
အားလပျတဲ့အခြိနျလေးတှကေို တနျဖိုးရှိစှာ အသုံးခနြိုငျစဖေို့ ဒီ YouTube channel လေးကို အတူတူ လလေ့ာကွရအောငျနျော။
CKC YouTube Channel Link -
ပညာဒါ Group join ရနျ
Web Development ဆိုငျရာစာအုပျမြားအား အခမဲ့ ဒေါငျးယူရနျ
Website ရေးဆှဲနညျး အခွခေံသငျခနျးစာမြားစုစညျးမှု
Microsoft Word သငျခနျးစာမြား စုစညျးမှု
ကှနျပြူတာ နှငျ့ Mobile Phone ဆိုငျရာ သငျခနျးစာမြား
Facebook Marking ဆိုငျရာ သငျခနျးစာမြား စုစညျးမှု
Web Design Basic | Lesson-1 |HTML Basic Frame| Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic|Lesson-2 |Heading And Paragraphs |Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic|Lesson-3|Images Attributes and Values|Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-4 |Attributes, Values and Meta Tag| Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-5 | Font Tag and Attributes | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic|Lesson-6| Link Tag and Attributes |Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic|Lesson-7| Formatting Tag |Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic|Lesson-8| Pre Tag and Xmp Tag |Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-9 |Hyper Link and Image Link| Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-10 | Anchor Link and Email Link | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-11 | Horizontal Rules and Line Break | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-12 | HTML Comments | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-13 | Quotations | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-14 |Colors Coding Methods| Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-15| Ordered List | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-16 | Unordered List| Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-17 | Definition List| Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-18 | External File Linking | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-19 | Absolute Link And Relative Link | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-20 | Grouping Tags and Attribute | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-21 | Form Tags and Attribute | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-22 | Text Input Controls | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-23 | Submit Bottom Creation | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-24 | Check Box Control | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-25 | Radio Box Control | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-26 | Table Row and Table Data | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-27 | Table Header Cellspacing Cellpadding | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-28 | Colspan and Rowspan | Websiteရေးဆှဲနညျး
Web Design Basic | Lesson-29 | Marquee Tags | Websiteရေးဆှဲနညျး
Website ရေးနညျး စ/ဆုံး | How to design Website Layout?
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ နှင့် IT ဗဟုသုတများကို အမြဲလေ့လာနိုင်ဖို့ . . . . .
ဒီနေ့အတွက်တော့ နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်လေးများကို Web Development ဆိုင်ရာ စာအုပ်များကို အခမဲ့ Download ရယူနိုင်တဲ့ Website Link လေးနဲ့အတူ Website ရေးဆွဲနည်းတွေကို အခြေခံကအစ အသေးစိတ် Videos များကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖော်ပြ၊ သင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ CKC YouTube Channel လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ CKC YouTube Channel မှာ ဘာတွေလေ့လာလို့ရသလဲဆိုရင် Website ရေးနည်းအခြေခံ၊ Microsoft Word သင်ခန်းစာများ၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် Mobile Phone ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ၊ Facebook Marking ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ အစရှိသဖြင့် လေ့လာစရာတွေ အများအပြား ပါဝင်နေတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရမှာပါ။
အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတွေကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်စေဖို့ ဒီ YouTube channel လေးကို အတူတူ လေ့လာကြရအောင်နော်။
ပညာဒါ Group join ရန်
Web Development ဆိုင်ရာစာအုပ်များအား အခမဲ့ ဒေါင်းယူရန်
Website ရေးဆွဲနည်း အခြေခံသင်ခန်းစာများစုစည်းမှု
Microsoft Word သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု
ကွန်ပျူတာ နှင့် Mobile Phone ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ
Facebook Marking ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု
Web Design Basic | Lesson-1 |HTML Basic Frame| Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic|Lesson-2 |Heading And Paragraphs |Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic|Lesson-3|Images Attributes and Values|Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-4 |Attributes, Values and Meta Tag| Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-5 | Font Tag and Attributes | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic|Lesson-6| Link Tag and Attributes |Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic|Lesson-7| Formatting Tag |Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic|Lesson-8| Pre Tag and Xmp Tag |Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-9 |Hyper Link and Image Link| Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-10 | Anchor Link and Email Link | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-11 | Horizontal Rules and Line Break | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-12 | HTML Comments | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-13 | Quotations | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-14 |Colors Coding Methods| Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-15| Ordered List | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-16 | Unordered List| Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-17 | Definition List| Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-18 | External File Linking | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-19 | Absolute Link And Relative Link | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-20 | Grouping Tags and Attribute | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-21 | Form Tags and Attribute | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-22 | Text Input Controls | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-23 | Submit Bottom Creation | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-24 | Check Box Control | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-25 | Radio Box Control | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-26 | Table Row and Table Data | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-27 | Table Header Cellspacing Cellpadding | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-28 | Colspan and Rowspan | Websiteရေးဆွဲနည်း
Web Design Basic | Lesson-29 | Marquee Tags | Websiteရေးဆွဲနည်း
Website ရေးနည်း စ/ဆုံး | How to design Website Layout?